आयात प्रतिस्थापन आजको आवश्यकता::Online News Portal from State No. 4
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । विश्व बैंकलगायतका स्वतन्त्र निकायहरुले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर बढ्ने तर ८.५ प्रतिशत नपुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । लक्ष्य ठूलो लिनु अन्यथा हैन । तर, पछिल्ला केही आर्थिक सुचकाङ्कहरु भने निराशाजनक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो १० महिनायता ब्यापार घाटा झन चुलिँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को पछिल्लो दश महिनामा व्यापार घाटा झण्डै ११ खर्ब पुगेको छ । यो भनेको करिब १९.७ प्रतिशतको बृद्धि हो । बितेका १० महिनामा यस कुल वस्तु निर्यात पनि १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क रहेको छ । निर्यात केही बढे पनि आयातको तुलनामा यो अत्यन्तै न्यून हो ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले यो अवधिमा विदेशी मुद्रा संचिति पनि घटेको जानकारी गराएको छ । बितेको १० महिनामा करिब १० अर्ब विदेशी मुद्रा संचिति घटेको छ । विदेशी मुद्रा संचिति घट्नु भनेको देशलाई आवश्यक पर्दा आयात गर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुनु हो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । बितेको १० महिनामा रेमिट्यान्स बढेर ७ खर्ब २५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । रेमिट्यान्स बढ्नु राम्रो हो । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा देश रेमिट्यान्सले मात्रै धानेको छ । विदेशिएका करिब ४० लाख नेपालीले पठाएको पैसाले देश चल्नु भनेको दुखद अवस्था हो । जबसम्म देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना हुँदैन, उत्पादकत्व बढ्दैन, तबसम्म सम्मृद्धि कोरा कल्पना र नारामै सीमित हुन्छ ।
हो, देशले ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । देशमा प्रेट्रोलिय पदार्थ नहुँदा आयातमा भर पर्नु स्वभाविक हो । तर, पेट्रोलसँगै हिजोसम्म आत्मनिर्भर भएका बस्तुहरु पनि विदेशबाट आयात हुन थालेका छन् । नेपालले अमेरिकाबाट स्याउ, मेक्सिकोबाट मकै र भारतबाट चामल आयात गर्ने अवस्था आएको छ । तरकारीदेखि मासुसम्म विदेशबाट आउन थालेपछि व्यापार घाटा नबढेर के गरोस् ? देशमा यतिबेला सम्मृद्धिको नारा घन्किएको छ । तर, नाराले सम्मृद्धि आउने होइन ।
दुईचार दिन यस्ता नारा मीठो लागे पनि कालान्तरमा यस्ता नारा हावादारी गफमा बदलिन्छन् । अंकहरुलाई बदल्न सकिँदैनन । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरेर सम्मृद्धि वा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने पनि होइन । बरु,अहिले सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कको गहिो विश्लेषण गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्छ । कम्तिमा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सुधार्न के र कस्ता क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । जलश्रोतको उपयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । गाउँमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ । कृषिमा हुने लागत घटाउँदै उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । किसानलाई सहुलियत दिनुपर्छ र देशबाट युवाशक्ति विदेशिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।